Ubani Okukhokhelayo? | Martech Zone
Ubani Pays Wena?
NgoLwesithathu, July 19, 2006 NgoLwesithathu, July 20, 2016 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi ekugcineni sikhokhelwa amakhasimende ethu. UTom Peters unokuthunyelwe okuhle namuhla mayelana ne-GM kusuka ku-GM insider, uMike Neiss:
“Bheka, ngizizwa kabi ngabangani bami nozakwethu ku- [GM]. Kepha angibazweli. Bakhohliwe ukwakheka, bakhohlwa ikhasimende, bakhohlwa i-R & D, bakhohlwa ukuthi bayinkampani [yezimoto]. Ngokusobala ukushona kwabo kwakungukukhetha. Akusona isibonakaliso somnotho wethu, kepha ukukhetha okwenziwe egumbini lokufundela e- [GM]… Kungukugcina kokuminza kwenkampani ecwilayo.
“Ithemba lami elilodwa ukuthi bazoba yisifundo sodaba lwazo zonke lezo zinhlangano ezinethemba lokuba mkhulu njengo [GM]. Big nje iphahlazeke nzima. "
Obambele [GM] nebhizinisi lakho futhi [imoto] ne umkhakha wakho. Noma yini abafana ngayo?
Iningi Lezindaba Ezingalungela Ukuphrinta… INew York Times Iyancipha